कविता दाहाल बहुप्रतिभाको धनी मोडल एवं गायिकासंगको ताजा कुराकानी | onlineharpal.com
कविता दाहाल बहुप्रतिभाको धनी मोडल एवं गायिकासंगको ताजा कुराकानी
on: ९ बैशाख २०७४, शनिबार २०:१६ In: bignews1, अन्तर्वाता
आदरणीय दर्शक स्रोता आज पनि हामी यहाँहरुको साथमा अर्को एकजना पाहुना लिएर उपस्थित भएका छौ उहाँ मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहँले राम्रो मोडलिङ पनि गर्नु हुन्छ साथै मिठो गीतपनि गाउनु हुन्छ त्यस्तो छुटै प्रतिभाको धनि हुनुहुन्छ गायिका तथा मोडल कविता दाहाल आउनुहोस हाम्रो खबर कोसेली डटकमको सम्बादाताले उहाँसंग गरेको यो मिठो कुराकानी हेरौ।
-यहाँलाइ खबर कोसेली डटकममा स्वागत छ।
आफ्नो परिचय छोटो दिनुहुन्छ कि ?
– हजुर मेरो नाम कविता दाहाल हो।
हजुर गीत पनि गाउनु हुन्छ साथै मोडलिङ पनि गर्नु हुन्छ है ?
-हजुर म गीत पनि गाउँछु मोडलिङ पनि गर्छु।
अनि आज भोलि केमा बिजी हुनुहुन्छ ?
– म अफिस तिर नै बिजी छु भोकलहरु गरिराछु, मोडलिङहरु पनि गरिराछु सबै तिर बिजी नै छु।
मोडलिङ गर्नु हुन्छ तपाइको नृत्यहरु राम्रो छ तपाइलाई चै कस्तो लाग्छ ?
– मलाई पनि राम्रै लाग्छ मेरो सोच नै मोडलिङ संगीत गर्ने थियो मलाई राम्रै लागिराछ।
तपाई यो क्षेत्र तिर चै कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
-म यो क्षेत्रमा चै पहिला नै मेरो पशुपति दाइहरुसंग कन्टयाक थियो उहाँसंग पहिलानै मैले एउटा दोहोरि गाइ सकेको थिए उहाँले तिमीसंग यस्तो कला रहेछ नानी यस्तो कलालाई नलुकाउ तिमि आउ यो क्षेत्रमा तिमीले आएर गर्न सक्छौ भन्नु भाथ्यो त्यस पछि म आएर भोकलहरु सिके डान्सहरु सिके अनि तेसरी नै प्रबेस गरेको हो।
तपाईले पहिलो मोडलिङ चै कुन गीतबाट सुरु गर्नु भयो ?
– मैले जापानको लाहुरेबाट सुरु गरेको हो।
तपाइँलाइ ग्ल्यामर भन्नाले कस्तो लाग्छ ?
– ग्ल्यामर भनेको राम्रै लाग्छ यो क्षेत्र राम्रो छ।
ग्ल्यामर भनेको एउटा कला हो भन्छन यसलाई प्रस्तुत गर्न नजान्दा भल्गर हुन्छ नि हैन र ?
-त्यो त अब धेरै गारो हुन्छ एक्टिङ र डान्सहरु सिकेर गर्नेलाइ चै राम्रै हुन्छ अब डान्स नै नआउने एक्टिङ नै नाउनेहरुलाई चै गारै हुन्छ।
तपाई त गायिका पनि हो कुन चै गीत पहोलो गाउनु भाछ ?
– मैले पहिलो गीत चोखो माया लाउँछु भन्ने गाको छु।
तपाईलाइ यो क्षेत्रमा काम गर्दा सरो, गारो अफ्ठ्यारो केहि परेको छ ?
-मलाइ परिवारको सपोट पनि छ त्यस्तो अहिले सम्म केहि छैन।
जेहोस यो क्षेत्रमा तपाईलाइ सहजै छ काम गर्न ?
-हजुर सहजै छ।
परिवारको साथ सहयोग कस्तो छ ?
– राम्रो छ मलाइ यो क्षेत्रमा जा भनेर मेरो ड्याडीले नै भन्नु भाहो अहिले सम्म घर परिवारको राम्रै साथ सपोट छ।
तपाइलाई रमाइलो लाग्ने मौसम चै कुन हो नि ?
– मलाइ रमाइलो लाग्ने मौसम बैशाख महिना नै हो किनकि यो हमिना हरियाली हुन्छ।
दिनको समय हुन्छ नि बिहान बेलुकी कुन समय मन पर्छ ?
– मलाई बिहानको समय नै मन पर्छ बिहान छुट्टै फ्रेस हुन्छ।
तपाईलाइ मन पर्ने ठाउँ मध्ये कुन हो ?
-मलाइ त मेरो दोलखा नै मन पर्छ।
तपाइलाई मन पर्ने फुलहरु मध्ये कुन मन पर्छ ?
– लालि गुराँस मन पर्छ दोलखा तिर पनि पाइन्छ मलाई असाध्यै मन पर्छ।
यो मोडलिङमा प्रवेस गरेको चै कति समय भयो ?
– डेढ बर्ष जति भयो।
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चै कतिको संघर्ष गर्नु पर्यो त ?
– गरें मैले छ महिना जति धेरै संघर्सै गरें जे कुरा गर्दा पनि धेरै संघर्स गर्नु पर्ने रहेछ मै त्यहाँबाट बुझें ।
डान्समा पनि थुप्रै विधा हुन्छन त्यसमा कुन चै बढी मन पर्छ ?
– मलाइ मोर्डन मन पर्छ।
यहँले डान्सको स्पेसल क्लासहरु लिनु भाछ ?
– हजुर मैले लिएको छु।
कुन ठाउँबाट लिनु भो ?
– मैले गंगबुँ हिमसम्झौताबाट लिराछु।
यहाँको निकट भविष्यमै कुन म्युजिक भिडियो हेर्न पाइन्छ ?
– मोर्डन खालको आउदै छ र तीजको गीतहरुमा पनि देख्न सक्नु हुने छ।
अनि तपाई त एक कुसल गायिक पनि हुनुहुन्छ गीत चै कुन ल्याउदै हुनुहुन्छ ?
– चोखो माया दिन्छु भन्ने मैले एरेञ्ज गरि सकेको छु मिक्सिङ गर्न मात्र बाँकि छ चाँडै आउँदैछ बजारमा।
यहँले यति मिठो गीत गाउँनु हुन्छ अनि राम्रो मोडलिङ पनि गर्नु हुन्छ प्रेम प्रस्ताब त धेरै आउछ होल है ?
– धेरै आउँछ, प्रेम प्रस्ताब त आइरहन्छ।
अहिले रिलेसनसीपमा हुनुहुन्छ त ?
– अहिले सम्म रिलेसनसिपमा चै छुइन त्यति इन्ट्रेस्ट पनि छैन र मन परेको खोजेको जस्तो पाको छैन पनि।
यो क्षेत्रमा रहेर जीवन गुजारा गर्न सकिन्छ त ?
– सकिन्छ मेरो पेसा नै यहि हो भनेर गर्ने हरुलाई त हुन्छ र नियमित यसैमा गर्छु मेरो भबिष्य छ भनेर लाग्नेहरुलाई चै छ यसमा।
अन्त्यमा हाम्रो खबर कोसेली डटकम मार्फत केहि भन्नु छ ?
-हजुरहरुलाई संगीत क्षेत्रमा केहि गर्नु छ भने आउँदा हुन्छ आएर केहि गर्छु भन्नेहरुलाई स्वागत छ राम्रोसंग गर्नुहोस् गीत संगीत भनेको त यस्तो होकी जहाँसुकै चल्छ जस्तै बिहेभोज पार्टी देखि लिएर चाड पर्ब जताततै चल्छ आउनुहोस गर्न सक्नु हुन्छ।